အကြွေတကယ်ရှားလို့လား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အကြွေတကယ်ရှားလို့လား
Posted by piti on Jul 6, 2011 in Copy/Paste | 18 comments
မန္တလေးမြို့က အချို့လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေဟာ အကြွေအနှုတ် တကယ်ရှားလို့လား၊ အကြံအဖန်လုပ်တာလားမသိပါဘူး။ ဆေးလိပ်တို့၊ ဘာတို့ ပဲ အမ်းနေကြပါတယ်။ မင်းသီဟတို့လို ဆိုင်ကြီးတွေကတော့ ငါးဆယ်ကအစ အနှုတ်အသစ်စက်စက်လေးတွေ အမ်းပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်အများစုကတော့ အကြွေအနှုတ်ရှိနေတာတောင် ခပ်တည်တည်နဲ့ ဆေးလိပ်တွေပဲ အမ်းနေပါတယ်။ ဆေးလိပ်အမ်းတယ်ဆိုတော့ ဖောက်သည်တွေအတွက် ဆေးလိပ်ပိုသောက်ဖြစ်သွားစေနိုင်တာပေါ့နော်။ မကောင်းတဲ့အကျင့်ပါပဲ။
အထူးသဖြင့် ယူနီစန်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကတော့ အတော်ကို ဈေးကွက်အမြင်ရှိတယ်လို့ ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။ အကြွေအနှုတ်ရှိတာတောင် ဆေးလိပ်တို့၊ သူတို့ဆီကုထုတ်တဲ့ သောက်လို့မကောင်းတဲ့ နန်းဝေ နို့မှုန့်ထုတ်တို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ အမ်းလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် တစ်ခြားတစ်ယောက်က ရာတန်ပေးပြီး ပိုက်ဆံရှင်းသွားတာ မြင်လိုက်ရတဲ့ကြားက အနှုတ်မရှိဘူးဆိုပီး ဇွတ်ကိုပဲ နို့မှုန့်ထုတ်တို့၊ ဆေးလိပ်တို့အမ်းတာ ယူနီစန်လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ရဲ့ အကျင့်ဖြစ်နေပါပီ။ သက်ဆိုင်ရာက အကြွေအနှုတ်တွေ လဲပေးနေတဲ့ကြားက စီးပွားရေးအမြင်ရှိတာကို ပြောပါတယ်။
တခြားဆိုင်အချို့က အနှုတ်အခက်အခဲရှိလို့ ဆေးလိပ်ကလေးသောက်ပါသလားမေးပြီး အမ်းပေးပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်ကတော့ အနှုတ်ရှိတဲ့ကြားက မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး လုပ်တာပါ။ ကျနော့်အဲဒီဆိုင်တွေမှာ ထိုင်နေတုံး ပြသနာဖြစ်တာကို ၄ – ၅ ခါ တွေ့နေရပါတယ်။ တခြားဆိုင်တွေက အခက်အခဲကိုပြောပြီး အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာဆိုတော့ လာသောက်တဲ့သူတွေက ဘာမှ ပြောသံမကြားရပါဘူး။ ယူနီစန် ဆိုင်တွေမှာတော့ ကောင်တာထိုင်တဲ့သူတွေကလည်း မာဆတ်ဆတ်နဲ့မို့ ပြသနာဖြစ်ကြတာလို့ လာသောက်တဲ့သူတွေက ပြောသံလေးကြားရတော့ အမှန်တကယ်အကြွေရှားတာလား၊ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်တွေက အကြံအဖန်လုပ်တာလား၊ ဘာမှန်းကို မသိတော့ပါဘူးဗျာ……..
ဟော… ကျနော့်ကိုလည်း ဇွတ်ကို ဆေးလိပ် အမ်းလွှတ်လိုက်ပါရောလား…. ကျနော်ကတော့ အရိုက်ခံရမှကြောက်လို့ ဘာမှ မပြောရဲခဲ့ပါဘူးဗျာ…….
တတ်နိုင်ရင် ဆိုင်နေရာတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးရေးသင့်ပါတယ်
သဂျီးမင်း ဘပုနာမည်နဲ့ဖြစ်နေပါလား …………. @_@
အကြွေအစားထိုး ကျုပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန်ထုံးနှလုံးမူပြီး ဈေးရောင်းခြင်းပေါ့
ပြန်အမ်းမယ့် အကြွေတွေအစား ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ ဆေးလိပ်၊ သကြားလုံး တွေအတွက်အမြတ်ငွေကတင်
တော်ရုံတန်ရုံဆိုင်မှာတောင် ၂၀၀၀၀ လောက်ကျန်ပါတယ်။ငွေအကြွပြန်အမ်းမယ့် အထဲကနေ အမြတ်ပြန်ထုတ်ကြတာများပါတယ်။အကြွေးတကယ်ရှားတာမရှားတာထက် အကြွေးရှားတယ်ဆိုပြီး အလုပ်လုပ်ကြတာပါ။
အကြွေအစားထိုး ကျုပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကျန်ထုံးနှလုံးမူပြီး ဈေးရောင်းခြင်းပေါ့။
တော်ရုံတန်ရုံဆိုင်မှာတောင် ၁၀၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀၊ လောက်ကျန်ပါတယ်။ငွေအကြွပြန်အမ်းမယ့် အထဲကနေ အမြတ်ပြန်ထုတ်ကြတာများပါတယ်။အကြွေတကယ်ရှားတာမရှားတာထက် အကြွေရှားတယ်ဆိုပြီး အလုပ်လုပ်ကြတာပါ။
အကြွေရှားတာလား ဘာလားတော့မသိဘူး။ အထူးကားတွေစီးရင် 500 တန်ပေးလိုက်ရင် 200 ပဲ ပြန်အမ်းတယ်။ 100 တန် မရှိလို့ နောက်မှ အမ်းပေးမယ်ဆိုပြီး ဆင်းသာလာတယ် ပြန်မရဘူး။ တောင်းပြန်ရင်လည်း သူတို့လက်ထဲက ပိုက်ဆံကိုပြပြီး မရှိလို့ပါဆိုတော့ ဘာပြောလို့ရမှာလဲ။ တစ်ချို့သော ရိုးရိုးကားတွေဆိုရင် ပြောသေးတယ်.. နောက်ကြုံရင် ယူပါတဲ့…. သူတို့ကားကိုပဲမှတ်ပြိး ပြန်စီးရမယ့်ပုံပဲ….
ဒီလို ဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းကို တိတိ ကျကျရေးပေးတာ သိပ်ကောင်းဗျ။
စောစောက ရုပ်ရှင် ဇတ်လမ်းက ဟာသ ဇတ်ကွက် ကြော်ညာ တခုမှာ ကြားလိုက်တယ်..
ဆိုင်တဆိုင်မှာ ဈေးလာဝယ်တော့ ဈေးသည်က ပြောတယ် ဟယ် ၁၀၀၀ တန်ကြီးပါလား.. ၉၀၀ ဖိုး တစ်ရှူးယူသွားပါတဲ့.. ဟုတ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲ..
လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေတော့ မပြောနဲ့ piti ရေ့…။ သူတို့ လ္ဘက်ရည်ရောင်းတဲ့ အမြတ်ထက် ဆေးလိပ် ရောင်းတဲ့ အမြတ်က ပိုတယ်တဲ့..။ ဒီတော့ ဆေးလိပ်ကို အသားပေးရောင်းတဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေချည့်ပါပဲ…..။ သူတို့ကအဲဒိလိုရောင်းတော့ မကြိုက်ရင်မထိုင်ရုံပါ…..။ လူညီရင်တောင် ဤကိုကျွဲဖတ်သေးတာပဲ…..။ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တဲ့သူတွေ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်လောက် တစ်ညီထဲမသွားပဲနေကြည့်ပါလား….။
နို့ မှုန့် ဆိုလို့၊ အသားမဲမဲ ရုပ်ဆိုးဆိုး သူဌေးသမီးလေး ဟာ နို့ မှုန့် ကြေငြာထဲ မှာ အသားဖြူဖြူ နဲ့ ကိုရီးယား လေး ဖြစ်နေသတဲ့ ။
ဆိုင်ဆိုရင်တော့ ကိုယ် အသုံးတဲ့တာကို လဲလို့ရတယ်။ တခါက coffemix အမ်းတာကို ဘောပင် ၊ အချိုမှုန့် နဲ့ လဲပေးဘို့ပြောတော့ လဲပေးလိုက်တယ်။
ရန်ကုန်-ပုသိမ် ကားလမ်းပေါ်က စားသောက်ဆိုင်တွေကျတော့ အကြွေအမ်းတဲ့ အပေါ်မှာတောင်ထပ်ပြီးအမြတ်ယူသေးတယ်
ဥပမာ-၁၀၀ကျပ် အမ်းရမယ်ဆိုရင် ၅၀ကျပ် တန် တစ်ရူးအမ်းတယ်
၂၀၀ ဆိုရင် ၁၀၀ တန် စနိူးတာဝါ အမ်းပါတယ်
အကြွေပြသနာက လတ်တလော တော်တော်ဒုက္ခရောက်နေတာ…. လက်ထဲရောက်လာတဲ့အကြွေကလဲ အကောင်းမရှိဘူး အစုတ်တွေချည်းပဲ ဒါကြောင့် တစ်ရူးတို့ ကော်ဖီမစ်တို့ပဲ လွယ်လင့်တကူ ယူလိုက်မိတယ်….ဆေးဆိုင်သွားရင်လဲ အကြွေ အမ်းစရာမရှိလို့ လူသုံးများတဲ့ ဆေးတွေပေးတာတွေ့ဖူးပါတယ်..
အကြွေရှားတာကို အကြောင်းပြပြီး အစားထိုးအမ်းတဲ့ တစ်ရှုးတို့..ဘာတို့ အပေါ်မှာ အမြတ်ထပ်ယူနေကြတယ်..လှည်းတန်းက လားရှိုးခုနှစ်လွှာပေါက်စီဆိုင်မှာလည်း ၁၀၀ အမ်းရမယ်ဆိုရင် ၅၀တန် တစ်ရှူး ၁ ထုတ်ပဲ အမ်းတယ်..တစ်ရှူး ၁ ထုတ် အရင်းက ၅၀ မရှိပါဘူး..အဲဒီတော့ ပြန်အမ်းတဲ့ တစ်ရှူး ၁ ထုတ်ကို ၅၀ ကျော် မြတ်တာပေါ့..မလိုချင်လဲ အောင့်သက်သက်နဲ့ ယူခဲ့ရတာ ပဲ..
အခုဆို city mark ၊ Ocean တို့မှာက ဘာမှ အစားထိုးမအမ်းဘဲ
30 လောက်လိုမယ်နော် 50 လောက်လိုမယ်နော်နဲ့ ပြောအမ်းတာကမှ ပိုဆိုးသေးတယ် …
ဟုတ်ပါ့ ဆိုင်ကြီးဖြစ်ပြီး ၁၀ ၂၀ နဲ့ ကိုယ်ကလျော့ပေးရမှာပေါ့ … ပြည်လမ်းစိန်ဂေဟာဆို ၃၀ အကြွေမရှိ်ဘူးဆို လျော့ပေးလိုက်တာပဲ … တစ်ခါတစ်လေ သဘောကောင်းတဲ့ ကောင်တာဆို ၅၀ တောင်လျော့ပေးသေးတယ် … လျော့ပေးတဲ့ဆိုင်မှာပဲဝယ်မှာပေါ့နော့် … တစ်ခါဝယ်ရင် မသိသာပေမယ့် ကြာလာတော့ သိသာတယ် တစ်ရှုးထုတ်တွေက
အကြွေ အကြောင်းပြပြီး လုပ်စားတာပါ
ဟိုနေ့ကဆို မြေနီမုန်း city mark မှာ
22800 ပေးလိုက်တာ 20 မလျှော့တဲ့ အပြင် အကြွေမရှိဘူးဆို ပြီး80ပါယူသွားတယ်
ဘယ်ရမလဲ 80 မရမက ပြန်အမ်းခိုင်းလိုက်တယ်
သူတို့ဆီကလည်း ၀ယ်ရသေးတယ် မလျော့ပေးတဲ့ အပြင် ပိုပါယူတယ်
ကိုယ်တွေတော့ တခါသားဈေးဝယ်တာ၈၀ကျပ်အစွန်းထွက်တာ ၅၀တန်၊၂၀တန်၊ ၁၀တန် အကြွေတွေပေးပလိုက်တယ်